Ku maamul booskaaga adag DaisyDisk, qiimo kala badh ah waqti xaddidan | waxaan ka imid mac
Uma baahnid caqli-gal in la qiyaaso jimcihii la soo dhaafay soo jeedinta Jimcaha Black Friday, tan iyo isbuucaan waxaan haysanay tiro badan oo dalabyo ah, ma aha oo kaliya codsiyada, laakiin sidoo kale qaabka qalabyada Mac-ga, sida kiiska wiilasha ee Laba iyo toban Koonfur, kuwaas oo bixiya inta lagu jiro maalmahan qiimo dhimis ilaa 50% ah qaar ka mid ah alaabadooda.
Markay timaaddo maaraynta meesha bannaan ee lagu hayo darawalkeena adag, macOS wuxuu na siinayaa nidaam garaafyo cajiib ah, kaas oo aan dhaafin taas, cajiib ah, maadaama aysan si gaar ah u burburin waxa iyo sida aan u isticmaaleyno darawalkeena adag. Haddii aad tahay maniac meel bannaan, DaisyDisk waxa laga yaabaa inuu yahay codsiga aad raadinayso, ka sokow Inta lagu jiro maalmahan waxay ku kacaysaa qiimaha kala badh, 6,99 euro.
Haddii aad rabto in aad mar qudha ogaato waxa ku jira qaybta kuwa kale, DaisyDisk waa codsiga aad raadinayso waxaa laga yaabaa in asal ahaan lagu dhex daro macOS. DaisyDisk waxay ina tusinaysaa burbur muuqaal ah oo ah qaab khariidad is dhexgal ah oo aan ku hubin karno halka iyo sida aan u isticmaaleyno booska darawalkeena adag. Laakiin waxa run ahaantii taagan, iyo in aynaan ka heli karin codsiyada kale, waa habka aan u fasaxeyno meel bannaan, maadaama aan kaliya u leenahay inaan jiido qaybta garaafka ee aan rabno inaan tirtirno qashinka.
Xawaaraha aqoonsiga faylka, maadaama dhowr ilbiriqsi gudahood ay nagu siin karto khariidad dhamaystiran oo ah meesha la haysto ee Hard Disk-yadayada.
Interface kaas oo noo ogolaanaya in aan si degdeg ah u aqoonsanno oo u maareyno meesha la haysto.
Waxay taageertaa in la wada baadho hal-abuuro badan oo adag.
Tirtir arjiyada ama meel bannaan oo ku yaal darawalkeena adag.
La jaanqaadi kara bandhigyada retina.
DaisyDisk waxay u baahan tahay macOS 10.10 ama ka sareeya, processor 64-bit ah iyo in ka badan 3 MB oo boos ah darawalkeena adag. Celceliska qiimaynta codsigan waa 5 xiddigood 5, wax codsiyo aad u yar ay ku faani karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ku maamul goobtaada darawalka adag DaisyDisk, qiime kala bar ah waqti xaddidan